Chrome 62 ho an'ny Android dia hanome fampidinana haingana. Androidsis
Chrome 62 ho an'ny Android dia hanome fampidinana haingana
Vao tsy ela akory izay, Google dia nanapa-kevitra ny handefa ny tranokalan'ny tranonkala Chrome 62 ho an'ny finday Android, manome ny mpampiasa fampiasa mahaliana maro sy fanatsarana ny fitoniana.
Navoaka tamin'ny herinandro lasa teo ilay kinova vaovao ho an'ny solosaina Mac, Linux ary Windows, miaraka amina endrika vaovao marobe, izay ahafahanay manasongadina fampitandremana mahery vaika kokoa ho an'ireo tranonkala izay mbola mampiasa ny HTTP protocol fa tsy HTTPS, miaraka amin'ny fanohanana ireo fonosana OpenType miovaova.
Chrome 62 koa dia mitondra API fangatahana fandoavam-bola vaovao ao amin'ny kinova iOS, ary manatsara ihany koa ny fampahalalana momba ny tamba-jotra amin'ny alàlan'ny fampiharana ireo mari-pahaizana momba ny kalitaon'ny tambajotra.
Chrome 62 ho an'ny Android dia hanome fampidinana haingana kokoa
Ankehitriny, vonona ny fitaovan'ny Chrome 62 ho an'ny fitaovana Android, ary hanomboka hiseho ao amin'ny Google Play Store ho an'ny mpampiasa rehetra izy mandritra ny herinandro vitsivitsy.
Anisan'ireo fanatsarana lehibe ny Chrome 62 ho an'ny Android azonay lazaina fampidinana rakitra haingana kokoa, fahaizana mijery sy mandika tenimiafina voatahiry ao amin'ny Chrome rehefa mihidy ny fitaovana, ary koa ny fahitana ny tahiry data amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny safidy "Data Saver".
Toy ny mahazatra, ity kinova ity koa dia misy fanatsarana kely sy fanamboarana bibikely izay tokony hanampy fiarovana fanampiny amin'ny Chrome.
"Vaovao tsara. Chrome 62 (62.0.3202.66) ho an'ny Android dia navotsotra ary ho hita ao amin'ny Google Play afaka herinandro vitsivitsy. Ity famoahana ity dia misy ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fitoniana, ary koa ny endri-javatra vaovao, "hoy ny orinasa tao amin'ny doka navoaka tamin'ity herinandro ity.
Google Chrome 62 dia fanavaozana natolotra ho an'ny mpampiasa Android rehetra, koa aza misalasala manavao ny fitaovanao raha vantany vao miakatra amin'ny Google Play Store ny kinova vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Chrome 62 ho an'ny Android dia hanome fampidinana haingana
Mahaliana ny mahafantatra ny fomba nikasan'i Google hanao fampidinana haingana kokoa amin'ny alàlan'ny rindrambaiko
Nahita tsy fahombiazan'ny audio an'ny Google Pixel 2
Araho ny "ady" eo amin'i Apple sy Qualcomm